Vhidhiyo: Ngoro yekutengera Kurega naListrak | Martech Zone
Svondo, Kubvumbi 24, 2011 Chitatu, November 30, 2011 Douglas Karr
Imwe neimwe nguva mukati apo iwe uri kuongorora Youtube, iwe unowana gem. Iyi vhidhiyo kubva kuListrak yakaburitswa muna Kukadzi pavakatanga yavo yekutengera ngoro yekusiya mhinduro, asi ini ndaida kuiburitsa pano nekuda kwezvikonzero zvakati. Kutanga, ipfupiso yakanaka yeyakasiya ngoro yekutengera… inotevera, vhidhiyo yakanaka uye ndinovimba Listrak iri kuburitsa zvimwe zvacho.
Heano mamwe makuru kubva ku Listrak chigadzirwa ruzivo peji:
Sekureva kwenzvimbo yaListrak, online dzakasiiwa ngoro dzekutengesa inyaya kudhura vatengesi vepamhepo 71% yekutendeuka kwavo yakaenzana pamusoro pe $ 18 bhiriyoni pagore. Saiti yeListrak ine yakasiya ngoro kupora karukureta saka unogona kukurumidza kufungidzira kurasikirwa kwako.
Listrak yekutengesa ngoro yekusiya yekumisazve mhinduro mhinduro inotora zvakare kusiiwa ngoro dzekutengesa uye inopa mikana yekutangazve vatengi kuburikidza neyakagadzirirwa zvipo uye mameseji akakodzera. Uchishandisa software yavo, mushandirapamwe wekubatanidzwazve unogona kunge uri email imwechete kana iwe unogona kukudziridza rwizi rweemaimeri kukurudzira kutendeuka.
Ngoro yekutengera kusiiwa haisi chinhu chete neCommerce. Chero chero saiti yemakambani inoshandiswa mukushambadzira kuri mukati inowanzo kuve neutera uko vashanyi vanorasika mukushandurwa. Dzimwe nguva, ingori nekuda kwekuti marongero akashata haape chero kukurudzira kwekuenderera mberi. Mamwe matambudziko anogona kunge ari akawandisa mafomu, anononoka kurodha peji nguva, kana zvimwewo zvinhu.
Kana iwe uchikwanisa kukudziridza nzira dzekubata zvakare vateereri, unowanzoona kuti yako shanduko mitengo inodarika chero shanduko dzauri kuwana kune vashanyi vatsva.